Vonoin’izy ireo Ny Hazo Any Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Vonoin'izy ireo Ny Hazo Any Ejipta	Voadika ny 30 Desambra 2012 12:45 GMT
Zarao: Manohy ny tantara fisaonany ny fandringanana ireo hazo sy ny fandrodanana ireo tranobe ntaolo any amin'ny zanabohitr'i Heliopolis any Kairo i Michael Hanna, Ejiptiana mpitoraka bilaogy sady mpitana trano fivarotam-panafody, ary nanoratra tononkalo anà hazo rofia [ar].
Telo volana lasa izay, naka sarinà rofia heverina ho ntaolo indrindra any amin'ny faritra izy. Nitoraka bilaogy izay:
Angamba ity Hazo rofia ity no lava sy ntaolo indrindra any amin'ny faritr'i Heliopolis, ary mety mitovy taona amin'io zanabohitra io mihitsy aza.
Hazo rofia antitra any amin'ny Araben'i Al Ahram, any amin'ny zanabohitr'i Heliopolis
Manohy i Hanna:
Nalaina teo amin'ny telo volana lasa teo io sary etsy ambony io. Omaly raha nandalo teo amin'io toerana io aho, dia gaga fa nisy olona nanapa-kevitra ny hanapitra ny ainy.. ary izao sisa no navelany. Sisa tavela amin'ilay vatan-kazo ary lavaka sisa hanarian'ireo olona ny fakony.
Lavaka, izay hanarian'ny olona ny fakony, eo amin'ny toerana izay nitsangananà hazo zarina fahiny
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraEman AbdElRahman
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 10 ora izayEoropa AndrefanaDia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa
18 ora izayEoropa Afovoany & AtsinananaMihetsika Ny Kroaty Manoloana Ny Fanambaran'ny ISIS Ny Fanapahan-doha An'i Tomislav Salopek
21 ora izaySyriaNy Fitsingerenana'ny Andro Nahaterahako
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, বাংলা, Français, Español, Aymara, اردو, македонски, عربي, English
Mediam-bahoakaTontolo_iainanaZavakanto & Kolontsaina